नेपालमा आज एकै दिन थपिए ११४ कोरोना संक्रमित – Avenues Khabar
१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १६:२७ मा प्रकाशित
काठमाडौं : बुधबार एकैदिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमणका नयाँ विरामीहरु भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार थप १ सय १४ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ८ सय ८६ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार बुधबार धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा ११ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । पोजेटिभ देखिने सबै सप्तरीका हुन् । यसैगरी कोसी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा झापाका १७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।
हेटौडामा भएको परीक्षणमा रौतहटका ७ सहित ८ जनामो कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । पोखरामा भएको परीक्षणमा बागलुङका ४ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । दाङमा भएको परीक्षणमा रुकुम पूर्वका ३, दाङका १५ गरी १८ जनामो पोजेटिभ देखिएको छ ।
यस्तै भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा १६ जना पोजेटिभ देखिएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताए । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ३८ जनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ । संक्रमण देखिएका मध्ये पुरुष ७ सय ९६ र महिला ९० रहेका छन् । नयाँ संक्रमितहरुको क्वारेन्टाइनमा उपचार शुरु गरिएको उनले बताए ।
पीसीआर विधिबाट ५८ हजार २ सय ७७ र आरडिटी विधिबाट १ लाख २ सय ८७ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ३ हजार ५ सय ८० र आरडिटी विधिबाट २ हजार ३ सय २० जनाको नमुना परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताए ।
२२ आश्विन २०७७, बिहीबार १०:२९
हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री…
लिमिमा अलपत्र चार पर्यटक सहित ३ नेपालीको उद्वार
हिमपातले हुम्लाको लिमिमा अलपत्र परेको…
३० असार २०७७, मंगलवार १०:३५
महोत्तरी : महोत्तरीको रातु खोलामा आएको…
नेपाल-इजरायल सम्बन्धको ६० वर्ष पूरा
५ चैत्र २०७७, बिहीबार १९:४२
काठमाडौं : नेपाल र इजरायलबीचको सम्बन्धको…
३० भाद्र २०७७, मंगलवार १९:१७
काठमाडौ । सरकारले एसिड आक्रमणको कसुर सजाय…
नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक स्थगित
१८ श्रावण २०७८, सोमबार ०९:५७
काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी…
काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरी र दाङमा दुई दुई…
काठमाडौं : नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ४ सय ५९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । १०…
एजेन्सी : युरोपेली देशहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्दो क्रममा देखिएको छ । तीनै देशमा आइतबार मृत्यु…
सप्तरी : सप्तरीमा कोरोना संक्रमित दुई सुरक्षाकर्मी,एक महिला सहित १७ जना निको भएर घर फर्केका छन् । दुई…
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १२:२० १० कार्तिक २०७७, सोमबार १२:२०
२६ कार्तिक २०७७, बुधबार ०७:५३ २६ कार्तिक २०७७, बुधबार ०७:५३
संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
१८ असार २०७७, बिहीबार १२:४२ १८ असार २०७७, बिहीबार १२:४२